राष्ट्रिय खबर – Page2– Sawal Nepal ||The Power of Information
काठमाडौं / प्रदेश २ मा सांसददेखि सभामुखसम्म निजी सचिवालयको तलबभत्ता आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत बुझ्दै आएका छन् । सभामुख, उपसभामुख, मुख्य सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभा सदस्यले निजी खातामार्फत तलब बुझेका हुन् । उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई यस विषय गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा तलबभत्ता बुझ्न नरोकिएको हो । प्रदेशभरी
कस्तो छ कोहलपुर दुर्घटनामा परेकी प्रकृती चन्दको स्वास्थ्य अवस्था ? यस्तो भन्छन् चिकित्सक …
कक्षा ७ की छात्रा हुन् प्रकृति चन्द । बाँकेकी यी ११ वर्षेको स्कुल (त्रिभुवन नमुना मावि) कोहलपुर चोक नजिक राजमार्ग छेवैमा छ । आइतबार पनि उनी सधैंझैं स्कुल पुग्ने तर्खरमा थिइन् । उनलाई स्कुटरमा पुर्‍याउन आएका थिए बुबा नगेन्द्रबहादुर । घरदेखि स्कुटरमा ल्याएका नगेन्द्र छोरीलाई राजमार्गको जेब्राक्रससम्म पुर्‍याएपछि वारिबाटै फर्कंदै थिए । अचानक उनको कानमा
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य,हेर्नुहोस कति छ तोलाको ?
काठमाडौँ / साताको दोस्रो दिन आज सोमबार पनि सुनको मूल्य घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ सयले घट्दै ७१ हजार रुपैंयामा कारोबार भैरहेको छ ।आइतबार प्रतितोला ७१ हजार २ सय रुपैंयामा कारोबार भैरहेको थियो । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेको छ । आज प्रतितोला ७०
भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारको सक्रियता बढ्यो,थपिए पाँच हजार उजुरी
काठमाडौं/ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको संख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो । यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा
गाउँपालिका प्रमुखको गाडीमा आगजनी !
खोटाङ/ रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख लिलानाथ निरौलाको वडा नम्बर ५ दुवेकोलस्थित निवासमा रहेको बा २ झ ३५२४ नम्बरको सवारीसाधनमा गए राति आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण सवारी जलेर ध्वस्तसमेत भएको छ । “म सुतिरहेको थिएँ, बम पड्किएको जस्तो ठूलो आवाज आयो”, उनले भने, “उठेर हेर्दा गाडीमा ठूलो आगोको मुस्लो दन्किरहेको थियो ।” करिब दुई घण्टापछि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा घुससहित १ सय ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । घुससहित नियन्त्रणमा लिएकाबाट अख्तियारले १ करोड ३७ लाख ७० हजार ४ सय ६० रुपैयाँ जफत गरेको छ । अख्तियारको साउनको तथ्यांक केलाउँदा १९ वटा अप्रेसनमा १० जना इन्जिनियर फन्दामा परेका थिए । भदौमा मात्रै
ट्रकको ठक्करबाट पैदाल यात्रुको ज्यान गयो
हेटौंडा- मकवानपुरको हेटौंडा ३ को बसामाडीमा ट्रकको ठक्करबाट एक पैदाल यात्रुको ज्यान गएको छ । स्थानीय ६५ बर्षीय लालबहादुर राईको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो । घटनाका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । ठक्कर दिने ट्रकको पहिचान नखुलेपछि प्रहरीले २ वटा ट्रकलाई नियन्त्रणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । खबर हब बाट
प्रधानमन्त्रिओलीले दिए यस्तो सन्देश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि सार्कको शिखर सम्मेलन अन्यौलमा रहेका बेला प्रम ओलीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्क स्थापनाको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै ओलीले नेपाल सार्कको बडापत्र, त्यसका सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल सार्कको संस्थापक सदस्य
लमजुङ बस दुर्घटना अपडेट : घाइते ६ जनाकै परिचय खुल्याे, ज्यान गुमाउनेकाे पहिचान हुन बाँकी
लमजुङ – सुन्दरबजार नगरपालिका ७ को पाउँदीमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका ६ जनाकै परिचय खुलेको छ । लमजुङ बेसीशहरबाट गोरखा जाँदै गरेको ग १ ख ५७९९ नम्बरको यात्रुवाहक बस पाउँदीमा दुर्घटना हुँदा गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका २ का ४२ वर्षीय आइतराम गुरुङ, त्यही ठाउँकी सुस्मिता गुरुङ, गोरखकै थुमी गाउँपालिका ३ का २८ वर्षीय
दुर्घटनामा स्कुले बालिकाको मृत्युपछि स्थानीयले जलाए ट्रक
काठमाडौँ । ट्रकको ठक्करबाट एक स्कुले बालिकाको मृत्यु भएपछि बाँकेको कोहलपुर तनावग्रस्त बनेको छ। कोहलपुरबाट नेपालगन्ज जाँदै गरेको ट्रकले आइतबार बिहान स्थानीय हाइस्कुल चोकमा ट्रकको ठक्करबाट त्रिभुवन उच्च माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत कोहलपु–१० की प्रकृति चन्दको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो । आक्रोशित स्थानीयले दुर्घटना गराउने ट्रक जलाएका छन् भने सडक अवरुद्ध